Wikicamp Nepal 2018/Participation/श्रेष्ठ भूपेन्द्र - Meta
​उत्तर - विकि कार्यशाला नेपाल २०७५ मा खासै कुनै पनि नयाँ तथ्यहरू सिकाइएन र सिक्किएन पनि, बरू बोटको प्रयोगका बारेमा सिकाइको थियो तर हामी जस्तो मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि त्यो कुरा कुनै पनी पक्षबाट प्रभावकारी सकेन । मैले यो कार्यशाला अघि जेजति कुरा जानेको थिए म तेसैमा सिमित हुनु पर्यो मतलब मैले यो कार्यशालामा त्यस्तो खास विशेष केही सिक्ने अवसर पाएन ।
उत्तर - नेपाली विकिपिडियाको तर्फबाट रहेको थिए ।
१ - यस कार्यशालाबाट म‌ैले नयाँनयाँ साथी बनाउने, भेट्ने तथा परिचित हुने अवसर प्राप्त भयो ।
२ - जानकी मन्दिर घुम्ने सुवर्ण अवसर मिल्यो ।
३ - म स्याङ्जाबाट सिरहा सम्मको यात्रामा निकै नौलो अनुभव गर्ने मौका पाए, तराईको भु-भागको पहिलोपटक ठाँउ परिवेश बुझ्ने तथा हेर्ने अवसर पाए ।
४ - योग सिवीरमा पहिलोपटक सहभागी जनाउने मौका पाइयो ।
के राम्रो भएन ?
१ - कार्यक्रमको शीर्षक विकि कार्यशाला नेपाल २०७५ हुन पर्ने ठाउँमा विकि क्याम्प नेपाल २०१८ राखियो जुन एकदमै गलत थियो ।
२ - कार्यक्रमको फारम देखि लिएर ढाँचा, प्रस्तुति, व्यवस्थापन र कार्यशैलीमा सबै अङ्ग्रेजी भाषाको मात्र बढवा दिइयो र प्रस्तुति लगभग सबै अङ्ग्रेजीमा भयो ।
३ - प्रस्तुतिका बेला अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरिएका कारण म जस्तो अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषा नबुझ्ने व्यक्तिका लागि भनेको कुरा बुझ्न र अन्य विकिपिडियन मित्रहरूको तर्कहरूबाट केही ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएन ।
६ - कार्यक्रम भएको स्थानमा ३-४ वटा वाई फाई उपलब्ध गराइएता पनि कुनैले राम्रोसँग काम गरेको थिएन । ७ - कार्यक्रम भरि अभ्यासको कमि रह्यो ।
८ - स्टिकी नोट भन्दै अनावश्यक रुपमा छलफल गरियो र अनावश्यक प्रश्नहरू माथि तर्क बितर्क लेख्न लगाइयो ।
९ - अनावश्यक रुपमा नेपालीहरूले प्राय अंग्रेजीको अत्यधिक प्रयोग गरे जबकि भारतका प्रतिनिधिहरूले आफ्नै राष्ट्रिय भाषा हिन्दीको प्रयोग गरेका थिए ।
१ - अब अाउँदै कार्यक्रममा फारम, शैली, शीर्षक, ढाँचा, प्रस्तुति र सम्बोधन पुर्णतया नेपाली भाषामा कायम गरियोस् ।
२ - अाउँदै कार्यक्रममा दुर्तगतीको नि:सुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हुनु पर्यो ।
३ - कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा विषयवस्तु राम्रोसँग छनोट गर्नु पर्यो ।
४ - प्रस्तोताले प्रस्तुति दिने र स्रोताहरूले ध्यान नदिने हुनु भएन ।
५ - विकिमिडियामा सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र कार्यशालामा समावेश गराउनु पर्‍यो ।
७ - हाल अत्याधिक रुपमा काठमाडौं उपत्यकाहरूमा मात्र कार्यक्रम गरिएको छ र अाउँदै दिनहरूमा नेपालका विभिन्न सहरका विद्यालयहरूमा विकिमिडिया बारे जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गरिनु पर्‍यो ।
यदि तपाईं स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वा निकट भविष्यमा तपाईंको गृह समुदायहरूको लागि कार्यशाला व्यवस्थित गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने उल्लेख गर्नुहोस् ।
कृपया यो वैकल्पिक खण्डमा हामीलाई न हिच्किचाइकन अन्य कुनै प्रतिक्रिया, सूचना, वा आफ्ना विचार राखिदिनु होला । सहभागीताका लागि धन्यवाद! ​
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikicamp_Nepal_2018/Participation/श्रेष्ठ_भूपेन्द्र&oldid=18788293"
This page was last edited on 16 January 2019, at 04:36.